Xaaska Boqorka Holland walaasheed oo laga helay gurigeeda iyada oo meyd ah… – Hagaag.com
19 Maajo 2019 in Sports // Kabtanka kooxda Manchester City Vincent Kompany oo isaga tagaya kooxda…
Xaaska Boqorka Holland walaasheed oo laga helay gurigeeda iyada oo meyd ah…
Posted on 8 Juunyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Boqoradda Maxima ee Netherlands walaasheed ayaa laga helay gurigeeda iyada oo meyd ah caasimada Argentina Buenos Aires.
Wararka ka imaanaya Argentina iyo Holland ayaa tilmaamaya in Ines Zorreguieta oo ah walaasha Boqorada ay is dishay.
Ines oo 33 sano jir aheyd waxay xiriir wanaagsan la laheyd walaasheeda Boqorada.
War saxaafadeed ka soo baxay Aqalka Boqortooyada ee Nederland ayaa sheegay in Queen Maxima, oo asalkeeda Argentin ah, “aad ayay uga naxday dhimashada walaasheed, waxayna dareentay murugo aad u xoog badan”.
Boqorada ayaa joojisay balamadii ay laheyd sida safar ay ku aad laheyd dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania, waxayna u dhaqaaqday Argentina si ay uga qeyb gasho janaasada walaasheed, waxaana la socda Boqorka Holland.
George Zorreguieta oo ah aabaha boqorada Maxima, ayaa geeriyooday sanadkii hore da’da 89 jir. Aabaha ayaa ahaa wasiirka beeraha xiligii Argentina xukumayey keligii taliska, arrintaasi oo kicisay muran dadka caadiga ah iyo baarlamaana Holland guurkeeda dhaxal sugaha Holland waagaasi.
Boqoradda Netherlands, oo 47 jir ah, ayaa leh laba walaalo ah, Martin iyo Joan, iyo sidoo kale saddex walaalo oo aan isku hooyo aheyn.
Afhayeen u hadlay dowladda Holland oo laga baahiyey TV- channel-ka “NOS” Ines Zorreguieta ayaa la il daraneyd cudurka murugada,sidaasi darteed ayaa loo badinayo geerideeda in ay aheyd mid ay is dishay.
About Admin (6531 Articles)